Ọnụ ụzọ Mgbochi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọnụ ụzọ Mgbochi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọnụ ụzọ Mgbochi)
akpaka mpịakọta shutter ụzọ Ndị a bụ ọnụ ụzọ nke oke ifufe na-eguzogide karịsịa na-eji eme ihe n'èzí. Ha kwesịrị ekwesị iji dị oke ojiji ma dị mfe iji rụọ ọrụ ọtụtụ narị otu ụbọchị. PVC windo ya na-ekpochapụ ihe ize ndụ nke ihe mberede. A na-arụpụta ọnụ ụzọ na-ekpochi windo na-emegharị windo dịka usoro nhazi...
Obere ngwa nchekwa na-agba ọsọ ngwa ngwa Uche dị nro na-echekwa ihe nchekwa dị mfe ma jiri ya rụọ ọrụ iji kpochapụ ngwaọrụ iji mee ka ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi dị ala. Ọdịdị ahụ jikọtara arụmọrụ nke nkwekọrịta ijikọta nkwụsịtụ. Mgbe a na-emetụta ahụ ahụ n'ụzọ na-enweghị isi, ọ na-apụ na...
Ime ụlọ ime ụlọ na-eji ụzọ ngwa ngwa emechi ụzọ
Ime ụlọ ime ụlọ na-eji ụzọ ngwa ngwa emechi ụzọ Uche dị nro na-echekwa ihe nchekwa dị mfe ma jiri ya rụọ ọrụ iji kpochapụ ngwaọrụ iji mee ka ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi dị ala. Ọdịdị ahụ jikọtara arụmọrụ nke nkwekọrịta ijikọta nkwụsịtụ. Mgbe a na-emetụta ozu ahụ n'ụzọ na-enweghị isi, ọ...
Ọnụ ụzọ Mgbochi Ọnụ ụzọ mgbochi Ogwe ọnụ ụzọ mgbochi Ọnụ ụzọ nhazi Oghere ọnụ ụzọ mgbochi Ọnụ ụzọ Ọnụ ụzọ mbata Ọnụ ụzọ nchekwa oyi